Zon'olombelona · Jona, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Jona, 2013
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Jona, 2013
Brezila30 Jona 2013
Herisetra Be Tamin'ireo Mpifakatia Mitovy Fananahana Sy Ireo Mpanohana Any Rosia
Eoropa Afovoany & Atsinanana30 Jona 2013
Ny fotoana laninao nanohanana ireo zon'ny LGBT, dia hitondra anao haka aina eny amin'ny toby fitsaboana.
Manafika Ny Fonenan'Ireo Shiita Ao Ejipta Ny Salafista, Efatra No Maty
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Jona 2013
Mpikambana Ejiptiana efatra ao amin'ny antokom-pivavahana Shiita no namoy ny ainy tao Ejipta androany tamin'ny fanafihan'ireo Salafista ny fiangonan'izy ireo, taorian'ny fihantsiana nataon'izy ireo tamin'ny Shiita nandritry ny roa herinandro. Araky ny filazan'ireo tatitra maro isan-karazany, nodorana sy notafihina ny fiangonan'ny Shiita tany Giza sy Kairo. Ny Al Badil News...
Vietnam30 Jona 2013
Mpitoraka bilaogy telo avy any amin'ny mpanohitra ao Vietnam no nosamborina tanatin'ny iray volana latsaka. Samy voampanga ho nanaparitaka fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana avokoa izy telo ireo.
Eoropa Andrefana30 Jona 2013
Namoaka ny anaran'ireo mpandresy tamin'ilay fifaninanana Olom-pirenena Eoropeana tamin'ity taona ity ny Parlemanta Eropeana. Nomena ilay Sehatra ho an'ny Voakasiky ny Fanaovana Antoka (PAH amin'ny teny espaniola) ny iray tamin'izany, fikambanana iray any an-toerana natao hanamaivana ny fijalian'ireo olona any Espaina izay voakasik'ilay krizin'ny fampindramam-bola "subprime" sy ireo voaroaka niala...
Abdulkareem al-Khadar, mpikambana mpamorona ny fikambanana miaro ny zon'olombelona mpanohitra ny Fanjakana, ny Fikambanana Saodiana Miaro ny Zo Politika Sy Sivily (ACPRA), dia notsaraina ary nosaziana valo taona am-ponja noho ny fanairany ny hevi-bahoaka sy ny fametrahany fikambanana miaro ny zon'olombelona tsy nahazo alàlana, ankaoatr'ireo fiampangana hafa, izay ny dimy...
Aostralia: Saritaka Ara-Piarovana Noho ny Fitadiavan-tSesintany Nataona Ejipsiana VoahelokaIray
Oseania29 Jona 2013
Nampirehidrehitra ny fifampitolomana politika ao anatin'ny fifidianana mananontanona amin'ny 14 septambra 2013 ho avy io ny fiampangana mpialokaloka Ejipsiana iray ho ‘mpampihorohoro jihadista’. Efa ho herintaona izao no nitazonana an'i Sayed Abdellatif ao amin'ny toerana mialoha ny idirana sisintany iray na dia eo aza ny fanairana mena nataon'ny Interpol tamin'ny...
Grenady Breziliana Hamelezana Tiorka
Amerika Latina28 Jona 2013
Ity lahatsoratra nosoratan'i Bruno Fonseca sy Natalia Viana, avy amin'i Agência Pública, ity dia nivoaka tamin'ny voalohany tamin'ny lohateny hoe “Bomba brasileira na pele turca” (grenady breziliana hamelezana ny Tiorka) , izy ity dia ao anatin'ny fanadihadiana manokana momba ireo vondron'olona mpanery ny manampahefana sy ny orinasa mpamokatra fitaovam-piadiana ao Brezila #IndústriaBrasileiraDeArmas. Hisy...
Lalàna Vaovao Ho An'ny Skype sy Viber any Bahrain
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Jona 2013
“Antony Fiarovana” no lazaina fa antony mahatonga ny fepetra vaovao izay mety hamarana ny fampiasana ny tolotra malaza tahaka ny Skype, WhatsApp, Viber ary Tango any Bahrain. Notsongain'ny gazety ny fanambaran'ny minisi-panjakana misahana ny serasera Fawaz bin Mohammed Al Khalifa fa nampidirina ny fitsipika vaovao misahana ny fampihatra Voice Over...
Hatezerana Naterak'Ilay Fanafihana Nihatra Tamin'Ireo Mpifindra Monina Tao Malezia
Azia Atsinanana27 Jona 2013
Toa mihanaka manerana ireo firenena rahavavy ilay herisetra ara-poko tao Myanmar. Misy amin'ireo Bodista Myanmar izay nifindra monina tao Malezia no voatafika tao anatin'izay herinandro maromaro lasa izay, heverin'ny olona maro fa mifandraika amin'ilay disadisa ara-poko sy ara-pivavahana misy ao Myanmar izany. Nahatezitra ny mponina maro ny fihetsiky ny governemanta...